Barnaamijka GvSIG - Aynu sii deyno ... - Gofumed
Barnaamijka GvSIG - aynu soo deyno ...
Luulyo, 2008 Geospatial - GIS, GvSIG, GIS kala cayncayn ah
Waxaan la sameynayo qarsoon, Laakiinse jidka midkood, oo ka tagay koox ka mid ah dadka sigaarka cabba aan raba dabcan gvSIG sidaa daraadeed waa inaan toddobaadkii si ay u bartaan si ay u isticmaalaan iyo bilaabaan umeerin toddobaad 2 waqti habeennimo ah ayaan ii qaadi doonaa. Sidoo kale boostadan waxaan ku bilaabayaa qayb cusub oo ka mid ah gudigeyga: gvSIG.
Dhab ahaantii ma aysan weydiisan codsigaas, waxay waydiisanayeen mid xor ah oo sahlan in la isticmaalo ... badan oo bilaash ah, oo sahlan in la isticmaalo su'aal la! ... xiiso la'aan shaki la'aan! Waxaan u maleynayaa inaan u isticmaali doono inaan isbarbardhigo Manifold iyo kuwa kale.
Haddii aad lahayd $ 250 ay ku talinaynaa kala cayncayn ah, sababtoo ah waan ogahay waxa sameeya iyo waxa aan, laakiin maxaa yeelay, iyagu ma doonayaan in ay ku qaataan lacag ka dibna aad si fiican u tag, waayo, qalab la Buugga diyaar iyo xasilloon (in kastoo aan iyaga kaga tegi qalooca waxbarasho lacag la'aan ah ... ama anigaa).
Iyo kuwa aan wax fikrad ah u laheyn GvSIG waa kuwan aasaasiga ah:
Barnaamijka gvSIG soo baxdo (sida dalab inay qandaraas ah) dhamaadka 2003, waxaa la horumariyo by Iver ku guuleystay ciyaarta, laakiin waxa uu leeyahay dallada hay'adaha of Fund Yurub Regional Development (ERDF), Wasaaradda Kaabayaasha ee Valencia iyo Jaamacadda Jaume aan
Liisanka waa GNU GPL
gvSIG 100% Java ayaa la horumariyaa (marka laga reebo qaar ka mid ah maktabadaha ECWy MrSID), sidaa daraadeed waxa ay ku socotaa labada Windows, Linux iyo Mac.
Maktabadaha ay ku horumartay waa heerarka sida Geotools iyo Java Topology Suite oo loo yaqaan JTS iyo kuwa kale.
Waa wax xiiso leh in sida muuqata ay taageerto "caalamiyeynta" ... waxaa loo maleynayaa inuu ku haboonaado asal ahaan luuqadda adeegsadaha ... mmmm?
Waxay taageertaa faylasha sida caadiga ah loo isticmaalo sida shp, dxf, dwg, dgn, kml iyo xataa gml
Waxay taageertaa qaababka raajada ah sida MrSID, GeoTIFF, ECW iyo ENVI
Taageerada shuruudaha OGC oo ay ku jiraan WMS, WFS, WCS iyo adeegyo magacaabid
Horumarinta shan dabeecadood oo waxay ahaayeen shuruudaha marka FIDIYAY: qaadan karo (Windows / Linux wakhtigaas), qaybsan, il Open, no-kharashka liisan, Interoperable (ugu yaraan la AutoCAD, MicroStation iyo ArcView waqtiga), ku xiran heerka.
Haddii aad rabto in la kordhiyo, lagu daro karaa adeegyada IMS iyo yaabab kale iyada oo loo marayo kordhin ka mid ah daawashada iyo tafatirka khariidaynta OpenStreetMap, kordhin xiriir ESRI ArcSDE iyo ArcIMS sida ... iyo kuwo kale.
Horumarka ugu weyn ee Barnaamijka GvsIG waa bulsho ka dambeysa horumarkeeda, kala saarid y dukumeentiyo... wax shuruud ah oo dammaanad qaadaya heerar gaarsiisan oo heer sare ah oo ah in dhammaan meheradaha furan aysan haysan ... ugu yaraan iyada oo xooga saara luqada Isbaanishka.
Halkaas ayaan u sheegaa sida ay u socoto.
Halkan waxaad ka heli kartaa download barnaamijka gvSIG
Halkan ayaad soo dejisan kartaa Barashada GvSIG
Halkan waxaad ku qaadan kartaa a Koorsada GvSIG
Post Previous«Previous Earth Virtual wuxuu soo rogaa sawirro, oo ay ku jiraan waddamada Hispanic
Post Next GvSIG: Dareenka koowaadNext »
7 Jawaab "Gogoldhigga gvSIG - Qalabka Entrémosle ..."
Malam admin admin macalimiin ku socota wadankan oo ah mid aad u qurux badan.
Qalbigooda ayaa ka xayiraya xakameynta xakamaynta cirridka
bogjungi bogga saya: http://sem.mahasiswa.atmaluhur.ac.id/
dan websaydhka kampus saya: http://www.atmaluhur.ac.id/
gvSIG oo kaliya ayaa taageera faylasha Microstation (dgn) qaabka V7
Kuwa qaabka V8 ma taageeri karaan.
fernando lazcano isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, waxaan su'aal ka qabaa in aan haysto faylalka Microstation oo aan awoodo in aan ku daro GVSIG iyo viseversa, ma jiraa dhibaato mise maya.
waad saxsantahay, waxaan rajeynayaa inaan heli karo wakhti aan kaga hadlo kordhinta kala duwan
Ugu dambeyntii waxaan bilaabay inaan baaro gvSIG ka dib markii la baaro dhowr bedelaad oo bilaash ah.
Waxaan u maleynayaa in adduunka Isbanishka ku hadla ay tahay hab kale oo wanaagsan, waana cadahay, maadaama uu ku guulaysto kala duwanaanshaha iyo saacadaha horumarka, waxay noqon doontaa mid aad u badan.
In sawir-gacmeedkaaga ma arko kordhinta sextant oo ah midka ugu xiisaha badan ee geoprocessing.
Ku salaamayaa adiga
epa! sida fiican ee ay halkaas u joogaan ... mararka qaarkood waxay bixisaa aragtida ah in dhar lagu jeexjeexo qofna. hehe
... si aad u soo jeediso Manifold ... xidhiidh jacayl / nacayb ah oo loo yaqaan 'old' xitaa waan arki doonaa.
ey ku faraxsanahay in aad bilaabay gvSIG hubi comments aad ka sii badan yihiin soo dhaweyn by Dadkii oo dhan oo gvSIG waxaan waxaad ka akhrisan (I seegi badan ka baxsan oo kaliya).
Haddii aad qabtid wax su'aal ah ha ka waaban inaad sii dhex mariso liiska dadka isticmaala halka beesha isticmaaluhu ku farxi doono.
Sida doorashadu horay u soo marinayso Manifold ... si fiican, waqti ayaa sheegi doona.